PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2018-12-30 - Umsindo u-NSFAS uchitha inqwaba yezicelo zokufunda
Umsindo u-NSFAS uchitha inqwaba yezicelo zokufunda
Isolezwe ngeSonto - 2018-12-30 - IZINDABA -
INQWABA yezitshudeni eziqhamuka emindenini edla imbuya ngothi, ingase ingakwazi ukuyofunda emanyuvesi ngonyaka ozayo njengoba isikhwama ebithembele kuso esiwuxhaso oluvela kuhulumeni, sizichithile izicelo zayo.
I-National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) kuvela ukuthi ichithe ngisho labo abanabazali abahola ngaphansi kukaR350 000 ngonyaka.
Lokhu sekuqubule uvalo ngokuthi zingase zithi zivulwa nje izikhungo zemfundo ephakeme ngonyaka ozoqalwa, zibe ziphazanyiswa yiziteleka njengoba kungaqondakali ukuthi kanti abanjani asebethola uxhaso kulesi sikhwama njengoba kuthiwa nasebeke baluthola uxhaso, bachithiwe kulokhu.
Izinkinga ngemali yalolu xhaso yizona eziyaye zidale iziteleka uma kuqalwa unyaka ezikhungweni.
Lesi sikhwama kulindeleke ukuthi sixhase abafundi ngoR32 billion, sithole izicelo ezingaphezu kuka-400 000 ngo-2019.
Bangu-88% abafundi abatshele lesi sikhwama ukuthi bafuna ukuyofunda emanyuvesi, kwathi u-12% wona wathi uyofunda ezikhungweni eziqeqeshela amakhono.
Okunguye owengamele lesi sikhwama uDkt Randall Carolissen, usezwakalise ukuthi uzosicubungulisisa izicelo zalabo abachithiwe.
Okhulumela uNSFAS uMnuz Kagisho Mamabolo uthe uCarolissen ukhathazekile ngokuchithwa kwenqwaba yabebefake izicelo.
“Kungenzeka ukuthi imininingwane efakwe yilabo abafuna uxhaso ibingashayi khona, nokuthi mhlawumbe ngesikhathi sekucwaningisiswa imininingwane abayifakile, kuvele okunye ngemali abayitholayo beyimindeni,” kusho uMamabolo.
Uthe zizobhekisiswa kabusha lezi zicelo ezichithiwe, kucutshungulwe imininingwane ethile kabusha ikakhulukazi lezo ezimayelana nomholo otholwa yimindeni yabafake izicelo. – ANA BHEKA IKHASI 10